घोषणा हावादारीः 'यस कारण पोर्न साइट बन्द गर्न असंभव' | Citizen Post News
काठमाडौं । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको भन्दै त्यस्ता सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले रोक लगाउने घोषणा गरेसँगै अहिले उक्त विषय के पोर्न साइट पूर्णरुपमा बन्द गर्न संभव छ वा छैन ? सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगकर्ताले बहस नै सुरु गरेका छन् । कतिपय युवतीले सरकारको उक्त कदमले झन थप बलात्कारको घटनामा बृद्धि हुने भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।
सूचना र प्रविधिसँँग नजिक रहेका अधिकांशले अनुभवीले चाहिं नेपालसँग पोर्न साइट बन्द गर्न सक्ने त्यस्तो कुनै पनि अध्याधुनिक प्रविधि नभएको र भएकै भएता पनि त्यो असंभव भएको बताए । कतिपयले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको हावादारी गफ भन्दै आलोचना गरे । उता शुक्रबारै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता गतिविधिले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको भन्दै यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाइएको जनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले इन्टरनेटको माध्यमबाट यस्ता यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको नेपालभित्र पहुँचमा रोक लगाउन तथा त्यस किसिमका वेभसाइट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताएका थिए । मन्त्रालयले अश्लिल सामग्रीको विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारण नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता सबैमा अनुरोधसमेत गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानूनले यौनजन्य तथा अश्लीलसामग्रीको प्रकाशन/प्रसारणमा बन्देज गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
यस कारण पोर्न साइट बन्द गर्न असंभवः
सवैभन्दा पहिला त पोर्न साइट बन्द गर्न कन्टेन्ट फिल्टरिङ सर्भर नेपाल टेलिकमले सेटअप गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाल टेलिकमबाट मात्र इन्टरनेट व्याण्डविथ दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पोर्न साइटलाई नियन्त्रण गर्न यहाँसम्मकी एनसेलले पनि नेपाल टेलिकमबाटै इन्टरनेट लिने ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
तर यो बिलकुलै संभव छैन । होला, अब एनटिसीको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पोर्न साइट हेर्न नमिल्ला तर अन्य टेलिकम, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई पोर्न साइट हेर्नबाट रोक्न त्यति सजिलो छैन । यो अबस्थामा कसरी नियन्त्रण हुन सक्छ ? अर्कोतिर, ओपेरा ब्राउजरमा विल्ड इन भिपिएन रहेको छ, जसका कारण ओपेरा ब्राउजरमार्फत कुनै पनि साइट सजिलै खुल्न सक्छ । अझ त्यो भन्दा राम्रो र सुरक्षित ब्राउजर टोर (टिओआर) पनि बजारमा छ । '
पोर्न साइट बन्द गर्नका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, नियमित अनुगमन गर्नसक्नुपर्छ, प्रत्येक घण्टा डाटा अपडेटवेस गर्न सक्नुपर्छ । जबकि बषौंसम्म विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेवसाइट नै अपडेट नगर्ने सरकारले यति ठूलो काम कसरी गर्न सक्ला र ?', सूचना तथा प्रविधिकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दीपेश खड्का भन्छन्,'जबसम्म नेपालमा भित्रिने डाटा एउटै पोर्टबाट ल्याउन सकिने ब्यवस्था गर्न सकिन्न तबसम्म करिबकरिब पोर्नसाइट निषेध असंभव छ । त्यो संयन्त्र तयार पार्नका लागि नेपालको आफ्नै स्याटलाइट हुन जरुरी छ । यदि तत्काल सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्न सकेको खण्डमा केहि हदसम्म संभव होला ।’
तैपनि ओपेरा तथा टिओआर ब्राउजरमार्फत जुनसुकै साइट खोल्न र हेर्न सकिन्छ । अर्कोतिर किकआसजस्ता भिपिएन प्रदायक पनि छन् । जसको माध्यामबाट मोबाइल वा कम्यूटरमा कन्फिगर गरी विना ब्राउजर पनि त्यस्तो साइट खोल्न सकिन्छ । जबकि एनटिसीकै आफ्नो सर्भर अहिलेसम्म छैन । टेलिग्गोब सर्भर व्याण्डविथको लागि भिएसएनएलको सर्भर डाटा ट्रान्समिटको लागि प्रयोग गरेको छ । जुन सेटअप नै बन्द गर्न सक्नुपर्छ ।
‘पोर्न साइट बन्द गर्न न नेपालसँग पर्याप्त लगानी, स्रोत र साधान छ नत यो संभव नै छ । नेपालले अबौं, खर्बौ लगानी गरेर पोर्न साइट बन्दै गरेको खण्डमा पनि नेपालीहरु पोर्न साइट नहेरी बस्नै नसक्ने भइसकेका छन् । यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेको पोर्न साइट बन्द गर्न त्यति सजिलो छैन जसरी यो कुरा आइरहेको छ ।’ खड्काले भने ।